awlaad jacayl dhalay udgoonkaad ku garataa
"Qalbi,"- walaal waa lagaa qaaday.
“wiilki,"- Abaayo qof miyaad raadinaysay.
“Qalbi,"- Walaal qof baan raadinayeyba kumaan odhan.
“Wiilki,"- Abaayo hablihi martida aha inad tahay wan u jeeda, side-waaye
“Qalbi,"- walaal waxba taas kaama galine, danhaaga sheego.
“Wiilki,"-Abaayo adiga uunbaan ku caawin-rabay NO.
“Qalbi,"- Walaal intaas mooye wax kale miyaad haysa.
“Qalbi,"- Walaal waan iska fiicanahay ee adigu ii warran, sideed tahay.
“Nimco"-Abaayo waan fiicanahay, oo hadaan isdhahayey maxaa ku dhacay gabadhi.
“Qalbi,"-Walaal malaha waan idinku soo daahay ee iga raali ahaada.
“Nimco,"-Maya, abaayo naguma aad soo dahin ee, walaalkay Aqli na maad istaqaanaan oo inteed isku barateen.